Izindaba - Ungazikhetha Kanjani Izinkophe Zamanga Ezifanele Ngokwakheka Kweso Lakho? | Ubuhle beKalocils
I-3D Mink Lashes
Ama-25mm Mink Lashes
I-Nail Powder yasePoland
Ungayikhetha kanjani i-eyelashes efanele yamanga wesimo sehlo lakho?
Abantu abaningi badidekile ngokuthi bangazazi kanjani izinhlobo zabo zamehlo nokuthi bangazikhetha kanjani izinkophe zamanga ezifanele. Ngezansi isingeniso esinemininingwane neziphakamiso zesethenjwa sakho. I-Kalocils Beauty ihlale ikuhlinzeka ngemivimbo engcono kakhulu yamanga.
Amehlo e-almond: Lesi simo samehlo sibonakala ngekona elingaphandle elidilikayo. Abesifazane abaningi abanalesi simo samehlo bafuna ukukhulisa ukujula nokuqina kwamehlo abo, ngakho-ke zama i-eyeliner njengokushanela ngesibindi esembozweni esingenhla, imibala engathathi hlangothi enamathele ngaphansi kweso, ne-liner engenhla nengezansi ngemibala ehlukahlukene. Ukuze usize amehlo e-alimondi abonakale emakhulu, khawula i-liner engxenyeni engaphandle yesembozo esiphezulu. Ukwenza amehlo e-alimondi abonakale eyindilinga, yeka ulayini ngaphambi kwekhoneni elingaphandle leso, noma usebenzise umthunzi okhanyayo noma ukubukeka okunentuthu noma okuthukuthele kuleyo ndawo.
Ama-Kalocils 3D Series Lashes Amanga: isitayela se-ELLEN
Vala Setha Amehlo: Amehlo asondele eduze azosondela ebhulohweni lekhala futhi asondele komunye nomunye. Ungaba namehlo asondele angasondele kunoma yimaphi amajamo esesike saxoxa ngawo noma angaba inhlanganisela yezimo ezisethiwe. Abantu abanamehlo asondele eduze bavame ukubonwa njengabantu abanobuqili futhi abahlakaniphile nabasethi abasondele eduze bayisici esiteleka kakhulu.
Ama-Kalocils 3D Series Lashes Amanga: Isitayela se-DEMI
Amehlo Okusetha Okujulile: Amehlo ajulile ajwayele ukuba makhulu futhi asethwe ajule esokeni kunabaningi. Zibekwe ngendlela eyenza ukuthi ithambo le-brow libonakale ligqame kakhulu futhi nemikhawulo yokuqhuma kwemvelo ivame ukudlisa phezulu kwamajwabu amehlo. Amehlo asethwe ngokujulile angadinga ukugcizelela ukuze ukhethe ukuqhuma okude phakathi, ukugoqa nokuphuma, kude nasebunzini. Imivimbo enguwodwana nayo isebenza kahle impela kulokhu kubukeka kwamehlo njengoba ukwazi ukugxila enkabeni, ukufaka okuningi lapho kukheshi osontekile.
Ama-Kalocils 25mm Lashes Amanga: Isitayela se-AVIVA
Amehlo ahlehlisiwe: Amehlo anciphisiwe avame ukusinda emakhoneni angaphandle futhi amakhona angaphandle axege noma ajike phansi ngenkathi amakhona angaphakathi ekhuphuka. Ukuma kwamehlo okuwohlokile kuyinkanuko kakhulu futhi kubonakala kusinda futhi kufudumele. Lokhu kubizwa nangokuthi amehlo okulala futhi kuyindlela yamehlo emangalisa ngempela. Amehlo anciphisiwe ajwayele ukuba makhulu futhi aziboleke kahle ekusetshenzisweni okunzima kokwenza izimonyo.
Ama-Kalocils 25mm Lashes Amanga: HELENA Isitayela
Amehlo ahlanganisiwe: Uma unamehlo afakwe izigqoko, uzobona isibaya esiphansi ngaphezulu kwejwabu leso, ngakho-ke lapho iso livulekile, ijwabu leso alibonakali futhi liphindela emuva emgodini. Ukuqhuma okufanelekile kwalesi sakhiwo, njengamehlo asethwe ngokujulile, kufanele kube kukhulu futhi kube nobude obuningi buqonde maphakathi. Imivimbo ye-Cluster noma abantu abangasebenza bangasebenza kangcono njengoba ungazakhela ukudala ukubukeka okufisayo. Ungesabi ukuqhuma komugqa, vele uqaphele ukuthi ungakhethi isethi engadonsela phansi isivalo, ibenze ibonakale incane.
Ama-Kalocils 25mm Lashes Amanga: Isitayela se-ALLISON
Amehlo we-Mono-lid: Amehlo agcwele imono achazwa njengamapulangwe ebusweni futhi awanaso isisindo esiqondile, kwesinye isikhathi asinalo nhlobo. Amehlo e-Monolid ajwayele ukuba nezinkophe eziqondile ngokwemvelo futhi zinenkani, ngakho-ke uma kukhulunywa ngokuthatha imivimbo emihle kakhulu, kungcono ukugxila emgodini wemigqa eminingi, njengoba izokwenza izimangaliso ekudonseni ukunaka okucashile nokho okuthandekayo kule pair zobuhle.
Ama-Kalocils 25mm Lashes Amanga: Isitayela se-ZOEY
Amehlo avelele / aphumayo: Isitayela sokuqhuma esinemvelo, esishiyana esifushane ukuya kubude obuphakathi bokuqhuma sizonikeza ukuvutha okulungile kepha silethe amehlo akho. Okwakhekile kwamehlo okuvelele noma okuxubile, ukwakheka kungasiza ekunciphiseni ukubukeka uma kuqhuma, noma kuphuma ukuphuma. Ukwenza iso libonakale sengathi lihlehla kancane ebusweni, sebenzisa umthunzi omnyama wesithunzi samehlo eduze komugqa wokuqhuma nangaphansi kwesembozo. Sebenzisa umthunzi okhanya kancane we-crease, bese uhlangana ngaphandle ubheke ethanjeni lobuso.
Ama-Kalocils 3D Mink Lashes: Isitayela se-DONNA
Amehlo Oyindilinga: Lokhu kubukeka kweso kuvame ukuba kukhulu, futhi kubukeke kuvulekile futhi abesifazane abaningi bathanda ukusebenzisa izimonyo ukunweba iso. Sebenzisa i-liner emnyama ukwelula kancane ukwedlula ijwabu leso emakhoneni angaphandle ukuze unikeze le nkohliso. Sebenzisa umthunzi ophakathi wesithunzi samehlo kujwabu leso (kuze kufike phezulu) bese unweba umthunzi kancane ukhuphuke kancane uye ngasethanjeni lobuso bese wehla kancane uye ngasembozweni esingezansi ukuze wakhe ukubukeka kwamehlo okuhlangene.
Ama-Kalocils Magnetic Eyelashes: I-Magnetic Lashes Kit
Isikhathi Iposi: Dec-23-2020
Lo ngumkhiqizo weKalocils Beauty kusuka kwaNanchang Weiti Technology Co, Ltd okhethekile ekukhiqizeni izinkophe zamanga, i-eyeliner, lip gloss, eyeshadow, mascara njll. I-Kalocils Beauty brand yasungulwa ngo-2019, kepha sineminyaka engama-10 yokukhiqiza ubuhle nokwenza isipiliyoni ukuthekelisa.Ngamanje, sinendawo yokusebenzela engamamitha ayisikwele ayi-3000 nabasebenzi abazinzile abangaphezu kuka-100. Inani lethu lonyaka lokuthekelisa lingaphezu kwe-US $ 3000,000. Ngiyethemba ukuthi singasungula ubudlelwano bebhizinisi besikhathi eside futhi senze inzuzo yomunye nomunye igcwaliseke.
Izandiso ze-Eyelash, Abadayisi bezinkophe, imivimbo ye-mink, Ukuqhuma Kwamehlo, i-eye liner, ezambiwa,